Ukucoca | May 2022
Nantsi indlela yokuCoca kunye nokuNciphisa iKeurig
Nantsi indlela yokucoceka rhoqo kunye nokwehla kwe-Keurig brewer yakho ukuze iqhubeke nokusebenza kwincopho yokusebenza.
Iindlela ezi-5 zokususa izibawu zeziqhamo- ungazibulala njani iimpukane zeziqhamo
Ungamisa njani iimpukane zeziqhamo ngaphambi kokuba zonakalise ukutya kwakho (kunye nekhitshi lakho).
Indlela eyiyo yokuhlamba iitawuli zakho
Nantsi into ekufuneka uyenzile-kwaye kangaphi. Indlu entle ibanjwe nguLiz Eichholz, osunguli kunye nomlawuli oyilayo wenye yeempawu zethu ezithandwayo, u-Weezie, ukuva ngqo ukuba zingakhathalelwa njani iitawuli zethu zokuhlamba-ukuqinisekisa ukuba zihlala ixesha elide.
I-10 yeHoldwood yoMgangatho ococekileyo oCoca uMgangatho-oGcinayo oCoca uMgangatho
Ukusuka ekuzinzeni nasekulungeni kwezilwanyana ukuze kube nokufikeleleka kwaye kufikeleleke, ezi zezona ndawo zokucoca iinkuni zilukhuni ukugcina indawo yakho ikhazimla.
Ukusetyenziswa okumangalisayo kweviniga emhlophe
Nangona eyaziwa kakhulu ngokusetyenziswa kwayo kokupheka, iviniga emhlophe ikwalungele nokucoca kunye nokuhlamba impahla.
Ukuphela kokucoca indawo yokuhlala: uluhlu lwakho lokutshekisha kwindlu engenachaphaza
Ngaba ufuna iingcebiso zokucoca? Shiya indawo yokuhlala engenabala ngaphandle kwezi ngcebiso zeengcali ezivela kwinkampani yokucoca.
Ungawunyamekela njani uMgangatho oLukhuni - Ulondolozo loMgangatho weenkuni
Nantsi yonke into uMbutho weSizwe woMgangatho woMthi (i-NWFA) uthi kufuneka uyenze ukukunceda ukugcina imigangatho yakho yeenkuni.
IiNkqubo ezi-7 eziCociweyo zokuCoca ukunceda ukuCoca imisebenzi yokuCoca uMakhaya
Ukucoca ii -apps zilungile ekuncedeni ukucwangcisa imisebenzi yakho yosuku, ukuseta uluhlu lokutshekisha kwigumbi ngalinye kwaye udlulisele imisebenzi kwamanye amalungu endlu.
Uyibuyisela njani i-Pan-Iron Pan-Iingcebiso zokususa iRust kwi-Cast Iron
Ngaba unepani yentsimbi enomhlwa? Musa ukuyilahla ngaphandle — phinda uyiphinde! Funda isikhokelo sinyathelo nenyathelo sikaEddie Ross sendlela yokubuyisela imfezeko.
Uluhlu lokujonga lokuGcina isiXhobo seKhaya- Izinto ezi-9 ekufuneka zenziwe ukulungisa indlu yakho ekwindla
Yonke into oyifunayo ukulungiselela ikhaya lakho ukuwa kunye neenyanga zasebusika ukonga amandla kunye nokukhusela umonakalo.
Ungayicoca njani iBarbecue- iiHBQ ezili-12 zokucoca iiHacks
Susa ukungcola, igrisi kunye nobumdaka kwi-grill yakho ye-BBQ ngezi hacks, iingcebiso kunye neendlela zokucoca i-BBQ kubandakanya ukukhuhla ibhiya, itswele kunye nekofu.
Iindlela ezili-10 zokuSebenzisa iVinegar emhlophe kwigumbi lakho lokuhlambela
Ngelixa iviniga emhlophe yaziwa kakhulu ngokusetyenziswa kwayo kokupheka, isebenza ngokumangalisayo kwigumbi lokuhlambela. Nazi iindlela ezili-10 onokusebenzisa ngazo iviniga emhlophe kwigumbi lokuhlambela.
Ungawasusa njani amabala aManzi kwiNkuni
Susa amabala amanzi kwifenitshala yeenkuni kunye neemveliso zekhaya I-Vaseline, ioyile yomnquma kunye neviniga, kunye nethambiso lokucoca amazinyo linokususa amakhonkco amanzi kwindawo yamatye ngokulula.
Kukangaphi kufanelekile ukuba ubeke endaweni yeeSpredishithi zakho?
Isenokuvakala igqithile, kodwa kukho izizathu ezininzi ezifanelekileyo zokuba kufuneka ubeke endaweni yamaphepha akho rhoqo — hayi ubuncinci kuwo kukuba uchitha isithathu sobomi bakho kuwo.
Ungazisonga njani iitawuli: Eyona Ndlela ilungileyo yokuSonga iitawuli, ngokweNdawo eNdilisekileyo
Akusayi kuphinda kulwe neetawuli zokuhlamba.
Uyicoca njani iRingi yeDayim
Funda indlela yokucoca iringi yedayimani ekhaya ungakhange uye kwijeeler. Into oyifunayo yisepha namanzi!
Ungasusa njani isikhunta kwizinkuni-Ukubulala isikhunta kwifenitshala yeenkuni kunye neBhodi yamasele
Ngequbuliso umnini wefanitshala ebunjiweyo ye-IKEA? Nantsi indlela yokususa isikhunta kwi-ASAP yokhuni, kunye neengcebiso zokunyanga nokubulala ukukhula kwesikhunta kwifenitshala kunye nakwifenitshala yebhodi yamasuntswana.
Ungazigcina njani iitawuli ezithambileyo ngaphandle kwesithambisi okanye ilaphu lokuthambisa
Ngaba itawuli yakho entsha iyakrwempa emva kokuhlamba kancinci? Inkqubo yesi-6 yamanyathelo iya kukunika ithayile ethambileyo, ethambileyo ngaphandle kwesicoci okanye isithambisi selaphu.
Uyicoca njani iRadiator yakho- Ungayicoca njani iRadiyetha ngamanyathelo ama-5
IiRadiator kufuneka zenziwe yinxalenye yolawulo lwakho lokucoca ngeveki ukugcina uthuli, ubumdaka kunye nokungcola. Kananjalo nokujongeka ngcono, iiradiyetha ziya kusebenza ngcono.
Indlela Yokumelana neembovane: Iindlela ezi-7 zokuLahla iimbovane endlwini
Ngaba ujonge indlela yokulahla iimbovane endlwini? Ezi zisombululo zendalo ziya kunceda ukugcina iimbovane ezimnyama zisendlwini yakho, ekhitshini nakwigadi enolawulo lwendalo.
UAlison victoria kunye nedonovan eckhardt
kuchaphulo olu malunga nekhaya nosapho
USteve noLeanne ford
Ipeyinti yeshoko edongeni
hamba kwigumbi lokulala